I-Cottage enomtsalane kwiGadi yase-Idyllic - I-Airbnb
I-Cottage enomtsalane kwiGadi yase-Idyllic
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguHelena
Ungarhoxa simahla ngaphambi kwe-12 Dis.
ICharbury yidolophu ethandekayo yaseCotswold, kwaye indlu yethu ifihlwe embindini. I-cottage encinci yamaplanga inendawo yangaphakathi ngokupheleleyo. Indawo yokuhlala enesicwangciso esivulekileyo nekhitshi (zonke iimod cons), iSky TV (inc ezemidlalo & bhanyabhanya), ibalcony ehonjisiweyo kunye negumbi lokulala liyi-ensuite. Sihamba ngemizuzu emi-5 ukuya kwisikhululo sendawo apho unokufumana uloliwe ohamba ngesikhululo ukuya eLondon Paddington ethatha iyure enye ne-15 imizuzu. Sikufutshane kakhulu kwiSoho Farmhouse kunye neDaylesford.
I-Cottage isegadini kwaye iya kuba yeyakho yonke ukuba uyonwabele, sihlala ngaphaya kwegadi engahoywanga iveranda yakho. Ii-pubs zasekhaya zingaphantsi kwemizuzu emi-5 ukuhamba ukuba ufuna ukuphuma kwaye malunga.
Iintsuku eziyi-7 e Charlbury
4.91 out of 5 stars from 313 reviews
4.91 · Izimvo eziyi-313
I-Charlbury yinto enqabileyo-idolophu engabonakaliyo yaseCotswold. Ngaphandle kwendlela ebethiweyo, kodwa kulula ukufikelela kuyo; efunwayo, kodwa phantsi emhlabeni kwakhona.
Iindlela ezigungxulwe ezantsi ezijikajikayo ze-B, iCharlbury ihlala kumda we-Oxfordshire weNdawo yase-Cotswolds yoBubuhle beNdalo obuNgaphandle. Iziko ledolophu elikwilitye lendawo elibonakalayo lidityaniswe yintaphane enomtsalane yophuhliso lwangoku, olunomtsalane olubekwe kwicala lentlambo yase-Evenlode.
Kuhlala kukho into eyenzekayo eCharlbury, njengoko iibhodi zezaziso ezixineneyo zibonisa. IiNtetho kwiNdlu yeKona, umculo ophilayo kwiShed kunye neRose & Crown, ukuhamba okukhokelwayo, iicawe eziphithizelayo, iminyhadala yasehlotyeni, iqakamba kunye namaqela kaMorris - kwaye oko kukukrwempa nje phezulu. Isikhululo seBrunel esithandekayo sinezitimela ezithe ngqo eOxford naseLondon; iivenkile ziquka ivenkile egcweleyo kwaye ehlala ixakekile ye-Co-op.
Yiza impelaveki, kwaye ulungiselele ukuthakathwa yidolophu yethu encinci enobuhlobo.
Ndiya kuhlala ndizama ukubulisa iindwendwe kwaye ndihlale kule ndawo iminyaka engaphezulu kwe-25 ndiyazi zonke ii-pubs zasekhaya, iindawo zokutyela, iihambo kunye neentsuku zokuphuma onokuthi uzithathe endiya kuvuya ukwabelana ngazo.
Ndonwabile kakhulu ukugcina isikhenkcezisi kwangaphambili ukuba siyafuneka, isikhululo kuhambo olufutshane kodwa ukuba iibhegi zakho zinzima ndingahlala ndikunceda endleleni yakho.
Ndiya kuhlala ndizama ukubulisa iindwendwe kwaye ndihlale kule ndawo iminyaka engaphezulu kwe-25 ndiyazi zonke ii-pubs zasekhaya, iindawo zokutyela, iihambo kunye neentsuku zokuphu…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Charlbury